Access MCP isiZulu
SARS Home > Client Segments > Individuals > Manage your Tax Compliance Status > Access MCP isiZulu
​UNGANGENA KANJANI KU-“MY COMPLIANCE PROFILE” (MCP) NGE-EFILING
I-MCP inika umkhokhintela ithuba lokubuka isimo sakhe sentobelo-ntela njengokuhlonzwa kwaso ngu-SARS ukuze ezokwazi ukulungisa isimo sokungathobi esihlonziwe. Ukuqaliswa kwe-MCP kuhlomisa umkhokhintela ngolwazi oluthe thuthu mayelana nentobelo-ntela futhi kuyisiqalo sokususwa kohlelo lweSitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela.
Kusemqoka ukuba uhlale njalo ubheka Isimo Sentobelo-Ntela sakho. Lokhu sekungenziwa kalula manje nge-SARS eFiling. ukuze ukwazi ukubona isimo sakho sentobelo-ntela noma izizathu zokuthi kungani uthathwa njengongathobeli imigomo yentela kanjalo nokuthi ungasilungisa kanjani isimo sokungathobi.
Isigaba 1 1: Ngena ku-eFiling
Ngena kwi-eFiling usebenzisa igama lokuvula kanye negamamfihlo (password). Uma ubungakabi ngumsebenzisi we-eFiling zibhalise ku- www.sarsefiling.co.za.
Udinga ukuba ngobhalisiwe kwi-eFiling futhi ube nokukodwa okuthelelwayo [njengeNtela yeNgenisomali, iNtelantengo (i-VAT) kumbe iNhlawula-Nganzuzo (PAYE)] osekufakiwe kwiphrofayili yakho yomkhokhintela ukuze ukwazi ukusebenzisa izinhlelo zeSimo seNtobelo-Ntela (I-TCS).
Isigaba 2: Thombulula imisebenzi yeSimo Sentobelo-ntela
Ongoti kwezeNtela kanye nabalawuli be-eFiling ezikhungweni kufanele baqinisekise ukuthi banike amalungulelo afanele kubasebenzisi abadinga igunya lokufinyelela lapho kuvezwe khona isimo sentobela-ntela. Ngemininingwane ethe thuthu mayelana nokwaba la malungelo, unxuswa ukuba ubheke ku- “Umhlahlandlela weSimo Sentobela Ntela kwi-e-Filing”
Udinga ukwenza iSimo seNtobelo-Ntela sisebenze kanye ngemva kwalokho sizohlala sivulekile. Uma usuyithombisile futhi usudidiyele wadalula zonke izinombolo-nkomba zakho zentela, uzogunyazwa ukufinyelela kweyakho i-My Compliance Profile (MCP).
Step 3: Buka “i-My Compliance Profile”
Ungabuka iphrofayili yakho yentobelo-ntela ngokuqoka ikhethelo u-“My Compliance Profile”
Isimo sakho sentobelo-ntela sizobe sesivela njengakuhlonzwa kwaso ngu-SARS ebheka le mibandela yokuthoba:
Isimo Sokubhalisa –Kufanele kube ubhalisile futhi uyasebenza ngentela okufanele engabe uyayithela;
Ukwethula Izimbuyiselo Qinisekisa ukuthi akunazimbuyiselo ezisilele ngemva kosuku olungujuqu lokwethula;
Izikweletu - Qiniseka ukuthi kawunasikweletu esisilele ku-SARS nesingakahlelelwa uhlelo lokusikhokha;
Ushicilelo olwesekelayo–Qiniseka ukuthi kawuphundulekanga ukuletha imininingwane efunwe kuwe.
Ikhasi le-MCP libukeka kanje-ke:
Kuzokuvela iphrofayili ephawulwe ngemibala ukuze ibalule ukuthi uyathoba noma cha.
Obomvu –Izindaba zakho zentela kazihlelekile futhi kawuthobeli imigomo yentela
Oluhlaza –Izindaba zakho zentela zihlelekile futhi uyayithobela imigomo yentela
Uma ucindezela inkinobho yokwelula engak wesokunxele sokubhalwe Ukubhalisa, Ukwethula Izimbuyiselo, Izikweletu kanye no-Ushicilelo Olwesekayo, kuzovela ulwazi oluthe xaxa mayelana nesimo sokuthoba salowo ongumsebenzisi we-eFiling. Uma ubona inkinobho ebomvu ekhomba ukungathobi, elula ukuze ubone isizathu sokungathobi nesu lokusilungisa.
Lezi zibaluli eziphawulwe ngemibala ziyisifinyezo sokuphelele sesimo sakho sentobelo-ntela mayelana nezidingo zakho zokuthoba.
Ngeminye imininngwane ngalezi zigaba, buka i-Umhlahlandlela weSimo Sentobela Ntela kwi-e-Filing yethu
Ngenzenjani uma i-“My Compliance Profile” Ibomvu?
Ikhethelo 1: Ukulungisa Ukungathobi
Ukuze kubhekwane nesimo sokungathobi, ungaqoka isibaluli sesimo se-Non-Compliant ukuze ubone ukuthi yini okudingeka uyenze ukulungisa isimo sokungathobi. Kokunye, ungalungisa isimo sokungathobi ngemigudu ekhona nezinhlelo ezidalulwe lapho.
Ikhethelo 2: Ukubuyekeza isimo sakho sentobelo-ntela
Uma ungagculisekile kumbe ungavumelani nesimo sakho sentobelo-ntela, ungenza isethulo esisho ukuthi kungani u-SARS kufanele abuyekeze isimo sakho sentobelo-ntela. Lokhu kungenziwa nge-eFiling ngokucindezela ku-“Challenge Status” bese wethula isizathu esiseka ukuthi kungani u-SARS kufanele aphinde abuyekeze futhi isimo sakho sentobelo-ntela.
Ngemva kokwethula uzothola incwadi yokwazisa kanye nenombolo yenkonondo. Uma kukhona ushicilelo olusekelayo njengobufakazi bezinkonondo zakho, usuzokwazi manje ukululetha ngekhasi lokusebenza lokho kukhononda.
Ikhethelo lika-“My Account Enquires” ngaphansi kweSimo Sentobelo-Ntela sikwenza ukwazi ukubuka imibuzo mayelana ne-akhawunti nokubandakanya inqubeko ngalokho okwethulelwe “ukubuyekeza Isimo”
Shayela kwi- Contact Centre ku- 0800 00 SARS (7277) noma uye egatsheni eliseduze lawka-SARS
Last Updated: 24/05/2016 4:34 PM ​